Qof looga shakisanaa Coronavirus, lana karantiilay oo ku geeriyooday deegaanada Puntland - Jowhar Somali Leader
Home Somali Qof looga shakisanaa Coronavirus, lana karantiilay oo ku geeriyooday deegaanada Puntland
Qof looga shakisanaa Coronavirus, lana karantiilay oo ku geeriyooday deegaanada Puntland
Guddiga Puntland u qaabilsan Ka hortagga cudurka Coronavirus ayaa ku dhawaaqay in qof looga shakisanaa COVID-19 uu geeriyooday, iyadoo baaritaankii laga qaaday ay dhineyd natiijadiisa.
Qoraal ka soo baxay Guddiga ka hortagga COVID-19 ayaa lagu sheegay in qofkan uu karantiil ahaa, iyadoo aanay sheegin halka uu ku geeriyooday, balse lagu caddeeyay qoraalka inuu ku geeriyooday deegaanada Puntland.
Sidoo kale qofkan karantiilka ku jiray ee geeriyooday natiijadiisa baaritaan la sugayay, lana filayo in maanta la helo natiijadaas.
Haddii la caddeeyo inuu u dhintay COVID-19 waxaa uu noqon doonaa qofkii u horreeyay ee ugu geeriyooda deegaanada Puntland cudurkan.
Dhinaca kale Guddiga ayaa qoraalkooda ku sheegay in sagaal ruux oo looga shakiyay cudurkan la karantiilay, isla markaana baaritaanka sagaalkan ruux la qaaday, si loo soo xaqiijiyo badqabkooda caafimaad.
Ugu dambeyn Guddiga Puntland u qaabilsan ka hortagga COVID-19 ayaa ugu baaqay dadka karantiilka ku jira in aysan ka soo bixin guryahooda, illaa laga xaqiijiyo caafimaadkooda, si looga hortago faafitaanka cudurka Coronavirus.